Admin Manager | Htoo Zoos and Gardens Business Unit ﻿
Admin Manager M (.)
6.11.2018, Full time , Business Service
Company: Htoo Zoos and Gardens Business Unit
•	သက်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ် ရှိရမည်။
•	Administration ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို Senior Admin Manager အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ညွန်ကြားချက်များ အတိုင်း အကောင်အထည်ဖော်လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။
•	အလုပ်နေရာ - နေပြည်တော်
•	ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီး Management နှင့် ပက်သက်သော Certificate (or) Diploma ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။
•	Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
Work location Zoological Garden Yangon, Corner of Kabar Aye Pagoda Road and Kan Road, Mingalar Taung Nyunt Township.
Junior Graphic Designer M/F (.)
472 Days, Full time , Business Service
•	Adobe Photoshop ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
•	သက်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ် ရှိရမည်။ •	ရုံးတွင်းနှင့်ဥယျာဉ်တွင်းစီမံရေးရာကိစ္စရပ်များကိုဆောင်ရွက်ရမည်။ •	Administration ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို Senior Admin Manager အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ညွန်ကြ� ...
Social Media Marketing M/F (.)
•	Social ပိုင်းဆိုင်ရာကြော်ငြာခြင်းကိစ္စများလုပ်ဆောင်ရမည်။ •	Microsoft Application များကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
Landscape Manager M/F (.)
•	ဥယျာဉ်သန့်ရှင်းသာယာလှပပြီး စိမ်းလန်းစိုပြေရေးအတွက် စီမံဆောင်ရွက်ရမည်။
Admin Manager Admin,Secretrial&PA Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon Htoo Zoos and Gardens Business Unit Admin, Secretarial & PA jobs Admin, Secretarial & PA jobs Admin Manager Jobs in Myanmar, jobs in Yangon